Kala-bar Cuntadii Qaxootiga Soomaalida ee ku jira Xeryaha Kenya oo la dhimay.
In ka badan 400,000 oo Qaxooti ku sugan Xeryaha Qxootiga ee dalka Kenya ayaa waxaa saamayn ku yeelatay qorshaha ay Hay’adda Cuntadda Adduunka (WFP) ku yareynayso Raashinka loo qoondeeyey in la siiyo Qaxootigaasi.,
Afhayeenad u hadashay WFP oo lagu magacaabo Challiss McDonough ayaa sheegtay inay aad uga wlaacsan yihiin saamaynta uu qorshahaasi ku yeelanayo Qaxootiga.
Iyadoo la hadlaysay The Thomson Reuters Foundation waxay sheegtay inay qorsheynyaan inay Qaxootiga Kharaj ugu shubaaan Mobyladooda si ay ugu iibsadaan cuntadda.
Hay’addaha Gargaarka waxay qof kasta oo ka mid ah Qaxootiga Mobaylkooda ugu diraan lacag dhan 2 Dollar ilaa 5 Dollar bishiiba, si ay ugu soo iibsadaan Cuntada Darayga (Fresh Food) ee lagu iibiyo Suuqyada u dhowdhow.
Kenya waxay marti-gelisaa 434,000 Qaxooti oo ka kala yimid 21 Waddan, kuwaasi oo badankooda ka soo jeeda dalalka Somalia iyo Koonfurta Suudaan.
Qaxootiga ku nool Xeryaha ku yaalla Xuduudka Kenya waxaa bishiiba la siiyaa saddex duleel oo labo duleel raashin isugu jira Bur, Digir, Booraj iyo Saliid iyo saddex duleel ooh al lacago.
Xerada Dhadhaab, 85% Qaxootiga waxay heli jireen 70% saamiga raashinkooda tan iyo bishii June ee sannadkii hore.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in la joojiyo Lacagaha Qaxootiga loogu xawilo Mobayladooda dhamaadka bisha soo socota ee January ee sannadka cusub ee 2017-ka.
WFP waxay kaloo sheegtay inay yareeyeen qoondada raashinka Qaxootiga ee bil kasta, taasi oo bilaabantay bilowgii bishan December.
Si kastaba ha haatee, Raashin-dhimista la soo deristay Qaxootiga ku nool Xeryaha Kenya waxay ku soo beegantay iyadoo Qaxooti badan oo Somali ah iskooda u go’aansdaeen inay ku soo laabtaan dalka hooyo.